Ogaden News Agency (ONA) – Kaligii Taliye Zenawi- Shirkii Oslo Freedom Forum 2012 -Filim
Kaligii Taliye Zenawi- Shirkii Oslo Freedom Forum 2012 -Filim
Posted by ONA Admin	/ May 31, 2012
Wadanka Norway caasimadiisa OSLO ayaa lagu falanqeeyay Kaligi Taliye Zenawi shir sanad kasta lagu qabto wadankaas oo lagu magacaabo OSLO FREEDOM FORUM – Out of Darkness into Light- bilmicnaa noqonaysa Golaha Xoriyada OSLO Mugdiga oo loogasoo baxo Iftiin. Hadaba kulanka Golahan oo sanad kasta looga doodo kaligood taliyaasha caalamka ka jira saameynta ay ku leeyihiin malaayiinta qof ay xukumaan ayaa sanadkan waxaa si qotto dheer looga faalooday kaligii taliye Zenawi iyo saameynta uu ku leeyahay 80 million ee uu kaligiis u taliyo.
Waxaa Kulankan kasoo qeyb galay saxafi u dhashay Ethiopia oo lasiiyay innuu ka faaloodo Zenawi iyo sida uu ugu tagri falo xukunkiisa iyo 80ka million ee Ethiopia ku hoos noolna uu awoodiisa ugu maquuniyay. Ninka lagu magacaabo Abebe Gellaw ayaa hadaba si xirfadeysan usoo bandhigay xukunka kaligi Taliye Zenawi iyo awoodisa u saamaxday innuu xukumo 80 million oo Ethiopian ah.
Kulankan ayaa hoosta looga Xariiqay in Ethiopia ay tahay wadan Hal nin ka taliyo. Waxaana lagu xaqiijiyay in Ninkaas ay wadamada Ree galbeedku ay naas nuujinayaan. Iyaga hadeysan jireena mar hore laga takhalusi lahaa.
Waxaa caado ah in Ninka ay wadamada Ree galbeedku ay soo tufayaan lagu salido haayadahooda bulsho iyo uruada Xuquuqul Insaanka, muddo yar kadibna lagu oogo danbiyo uusan qaadin karin. Wadamada Ree galbeedka ayaa lagu bartay in tobankii sannoba ay qof naas nuujiyaan kadib markay ka dhameystaana ama markii shacabku oggaadaan ee lagu kaco in ay ka hoos baxaan oo cidla uga cararaan. Waxaana lagaadhay waqtigii Zenawi looga carari lahaa kalinimadiisi.
Hoos ka daawo Filimkan lagu soo bandhigay Kaligii taliye Zenawi iyo xukunkiisa: